Fanomezana ho an'ny zazalahy vao teraka - inona no azonao omena, hevitra niandohana
Fanomezana ho an'ny zazavavy vao teraka - ny hevitra tsara indrindra sy ny tany am-boalohany
Ny fisafidianana fanomezana ho an'ny zazavavy vao teraka, mora mora ny mandresy ny fakam-panahy ary mahazo ny varotra sy tsy mahazatra. Zava-dehibe ny mitodika amin'ny lafiny ara-barotra momba ilay olana, ifanakalozy hevitra ny drafitra miaraka amin'ny ray aman-drenin'ny zazakely ary alao ny zavatra tadiavina sy iriana izay tsy hanangona vovoka eo amin'ny talantalana. Ny fanaovana ny fanomezana dia asa hafa sarotra, satria ny antsasaky ny fanolorana dia mamolavola fihetseham-po.
Inona no azonao omena zazavavy vao teraka?
Tiako ny rehetra handray ny fanomezana sy ny fahasoavana tamin'ny voalohany. Ho an'ilay zaza dia miezaka mitady zavatra manokana sy tsy hay hadinoina isika. Ny ankizivavy vao teraka dia mety tsy hankasitraka fanomezana iray, ka tokony ho tarihin'ny filana sy ny tsiron'ny ray aman-dreniny izany. Ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny zaza vao teraka dia natao ho an'ny reniny bebe kokoa, ary eto dia ilaina ny manontany azy.
Zavatra mahasoa ho an'ny zaza vao teraka ho fanomezana
Ireo zavatra mahasoa dia matetika atao amin'ny fanomezana fanomezana sarobidy sy azo ampiharina izay hampiasain'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mandritra ny herintaona mahery. Mba hisorohana ny ho voafandrika dia tokony horesahina amin'ny reny amin'ny ho avy foana ny fanontaniana toy izany.
Ny kibay dia singa manokana ary indraindray na dia ny ray aman-dreny aza dia sarotra ny manapa-kevitra ny safidy. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny manasa renim-pianakaviana iray handehanana eny amin'ny fivarotana, na hanolotra azy amin'ny taratasy fanamarinana amin'ny fanomezana iray, aorian'ny fisafidianana izany.
Ny fandriam-bidy dia zavatra tsy dia misy dikany firy, na dia efa tratra nandritra ny taona maro aza. Raha efa vonona ny efitrano ho an'ity tovovavy ity dia tsy hisy olana amin'ny fisafidianana ny famolavolana. Na izany aza, ilaina ny ifanakalozam-bava raha toa ka izy no mpanova, na modely amin'ny karazana kianja.
Ho an'ny fianakaviana tanora iray izay vao manomboka manamboatra akanim-borona ny ray aman-dreny ary manamboatra ny tranon'izy ireo, fanomezana tena tsara dia ho masira fanasana tsara. Azo atao ny mividy maromaro ho an'ny fahafenoan'ny sary, fa ny mama dia hankasitraka ny fotoana voavonjy amin'ny fanasana.
Ny fanomezana ilaina ho an'ny zazavavy vao teraka dia afaka mifidy manokana ny ray aman-dreny, raha mahazo taratasy fanamarinam-pividianana izy ireo. Mba hisorohana ny toe-javatra mahamenatra, dia mendrika ny hiantsena sy hianarana ny vidiny, noho izany dia ho mora kokoa ny mamaritra ny habetsaky ny fanamarinana.
Fanomezana ho an'ny zazalahy vao teraka avy amin'ny menaka
Mahita mofomamy tsara avy amin'ny kapôtina kofehy mipaoka amin'ny voalohany, saingy aorian'ity fanodinkodinana ity, tsy ny renim-pianakaviana rehetra no te hampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny tanjona voafaritra. Tsy dia fanomezana tsara ho an'ny zaza vao teraka no mahasoa. Olona maro no mihemotra tsikelikely ny diaper tsirairay mba hahazoana vahaolana hafa.
Harona iray misy fanomezana ho an'ny zazavavy. Ao no ahafahanao mametraka antoka ny teetera sy ny fihokoana, kapa misy kapaoty vita amin'ny tongotra, marika mahafinaritra toy ny kiraro na bibikely.
Raha ny mofomamy no safidy tsara indrindra dia azonao atao ny manodinkodina azy amin'ny zavatra izay azonao ampiasaina avy eo. Azonao atao ny mamolavola drafitra sy lamba bodofotsy ho an'ny ankizy, manamboatra ny mofomamy miaraka amin'ny kilalao ho an'ny kamboty.
Inona no tokony homena tovovavy vao teraka mba ho fahatsiarovana?
Raha fantatrao fa ny havana aman-tsakaiza dia nanolotra ny zazakely tamin'ny fitaovam-pihetseham-po rehetra sy mahasoa azo ampiharina, dia afaka mitoetra amin'ny zavatra tsy hay hadinoina izay azon'ilay zazakely ampiasaina na ankafiziny taona vitsivitsy. Na dia izany aza, hevitra ho an'ny zaza vao teraka dia mety ho fomba mahomby ho an'ny olana.
Fanamboarana volamena na kavina volamena no fanomezana manerantany ho an'ny zazavavy vao teraka amin'ny fotoana rehetra. Maro ny ray aman-dreny manapa-kevitra ny handavaka ny sofin'ny ankizivavy isan-taona, ny hafa kosa mamela fanapahan-kevitra ho an'ilay zaza.
Anisan'ireo zavatra tsy hay hadinoina ny sary albums tamin'ny taona voalohany niainan'ny fiainana, izay ananan'ny ray aman-dreny amin'ny fitomboan'ny zaza. Ny fanatrehana dia mendrika ny zavatra vita tànana amin'ny teknikan'ny scrapbooking , izay nataon'ireo tompon-daka araka ny filahatry ny fitaovana maoderina.
Ny zavatra natao tamin'ny tetikasa manokana ho an'ny ankizivavy iray dia hampahatsiahy azy ny sainao nandritra ny taona maro. Ohatra, tranon'ireo hazo malaza ho an'ny saribakoly. Hatramin'ny taona iray izy ireo dia hanao ny anjara asan'ny toeram-pivarotana ho an'ny kilalao ary avy eo dia mametraka ny tetikasa tena tetikasa.
Toy ny zaza vao teraka ho fanomezana
Amin'ity tranga ity, ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy ho resin'ny fakam-panahy ary hahazo fanomezam-pahasoavana sy haingam-pandeha. Ny bears amin'ny fitomboan'ny olon-dehibe dia hahagaga ny tovovavy iray, ary ho an'ny reny tanora ity dia vovoka iray hafa ao an-trano izany.
Ny zazavavy vao teraka dia afaka aseho amin'ny carousel iray ho toy ny cradle miaraka amin'ny feon-kira. Sakafo mena ho an'ny kamboty na sompitra, izay vita amin'ny hatsaran-tarehy ary natao hanasana matetika.
Toy ny milomano amin'ny endriky ny gidro, boky malefaka na zavatra kely mahafinaritra toy izany dia hiverina hilomano ho feno hafaliana.
Ny fanomezana kanto sy malefaka dia heverina ho toy ny dingam-pivoarana ho an'ny zazakely. Tsy misy azo lazaina amin'ny fomba azo antoka fa mitovy amin'ny ankizy rehetra izy. Toy izany ihany koa amin'ny mpandeha an-tongotra na kilaometatra - ny fividianana toy izany dia tokony hifanaraka amin'ny renin'ilay tovovavy.
Ny famahana ny fanontaniana mikasika ny zavatra hanomezana zaza vao teraka, saribakoly tsara tarehy ho an'ny pupa dia mitoetra ho safidy azo antoka ho an'ny tovovavy iray.
Fanomezana ho an'ny zazavavy vao teraka miaraka amin'ny tanany
Ny fanomezam-pahasoavana, vita amin'ny tanana vita amin'ny hazo, taratasy na lamba, dia azo antoka fa hajaina eo amin'ny efitranon'ilay tovovavy.
Sarimihetsika tsara tarehy ho an'ny sary, voaravaka amin'ny tady sy dantelina, voaravaka vato sy lamosina hafa, dia tsy sarotra ho anao ny manao izany. Ao amin'ny magazay ho an'ny fanjaitra dia misy banga amin'ny alàlan'ny albums, ary tsy hipoitra ny endrik'ireo olana.
Ny Textiles dia fanomezana foana ho an'ny fianakaviana tanora. Fitaovan'ny ankizy, mavo, karazam-baravarana karazan-tsakafo rehefa ampiasainao ny tsy fisehony, ary te hanavao izany aho. Ny fanomezam-pahasoavana mahasoa dia afaka mamorona, raha toa ka ataonao ho biby izany na zavatra hafa tsotra.
Ny paikady pataloha dia tsy nanary ny maha-zava-dehibe azy nandritra ny taona. Noho izany, ny valiny izay manjaitra ny zaza vao teraka ho toy ny fanomezana, dia ho bodofotsy amin'ny teknika ny patchwork , izay azo antoka fa azafady ny reny tanora. Ny alokaloka mamirapiratra sy ny sary manintona dia hamoritra ny efitranon'ilay tovovavy.
Taratasy niandohana ho an'ilay zazalahy vao teraka
Ny zavatra tsotra, aseho amin'ny endrika tsy mahazatra, dia mitondra fahafinaretana na dia amin'ny olon-dehibe aza. Ny fanomezana fanomezana tsara tarehy dia tena zavakanto.
Raha tapa-kevitra ny hividy akanjo ho an'ny zazakely, nahoana no tsy mamolavola bodi sy blouses amin'ny endrika raozy? Ny akanjo akanjo dia hampifaly kokoa an'i Mama noho ny voninkazo eo amin'ny latabatra rehefa mivoaka ny trano fonenany.
Hihetsika tsikelikely ireo ray aman-dreny tanora aorian'ny tsy fisian'ny torimaso voalohany ary manomboka manontany tena hoe haingana ny tovovaviny. Ny mpaka sary sy studio dia ho lasa fanomezana tsy mahazatra ho an'ny zazavavy vao teraka ary mahatsiaro ho an'ny ray aman-dreniny.
Tao amin'ny fivarotana dia efa misy boaty tsy mahazatra ho an'ny nify voalohany amin'ny zazakely, miaraka amin'ny sarin'ny toho-nify iray. Tena fanomezana tena izy tokoa ho an'ny zaza vao teraka.
Fanomezana fisaorana ho an'ny zaza vao teraka
Ankizivavy vao teraka dia reraky ny reny ary fifaliana ho an'ny papa. Maro no miantso ny zananivavy madinika ry zareo, ary amin'izany dia afaka manangana tsipika fanomezana ianao. Ampiasao ny kitapo voalohany ao anaty fandriana iray, mifanaraka amin'ny baiko miaraka amin'ny voalohan'ilay zaza. Manomàna fiakanjo iray tsy hay hadinoina izay tena hahatonga an'i Mom mitsiky. Raha efa efa tapaka ny hevitra momba ny fanomezana ho an'ny zazalahikely vao teraka, dia afaka mamorona foana ianao ary mamazivazy ny vazivazy.
Ny fanomezana sarobidy sy sangisangy dia mety ho ankasitrahan'ny ray aman-dreny, fa ny ankamaroan'izy ireo dia hitoetra ho fahatsiarovana maharitra hatramin'ny kely indrindra.
Ny fanomezana ho an'ny zaza vao teraka avy amin'ny volafotsy dia hahagaga ny ray aman-dreny ary hitadidy ny fanomezam-pahasoavana. Ankoatra ny firavaka, mendrika ny mandinika ny poti-jiro, sotro, na zavatra tsara tarehy vita amin'ny entana miaraka amin'ny sary sokitra sy faniriana.
Any amin'ny fivarotam-bokan'ny ankizy rehetra dia atolotra fanomezana ho an'ny ankizy efa vonona. Akanjo akanjo, akanjo fitafy manontolo amin'ny fanapahan-kevitra stylistic.
Ao amin'ny fivarotana firavaka dia misy fanomezana ho an'ny zazalahy vao teraka sy ny reniny avy amin'ny iray na miaraka amin'ny fanaka vita amin'ny metaly sarobidy.
Inona no tokony hanomezana fanomezana ho an'ny zazakely vao zazakely?
Ireo mpifankatia dia efa nanaiky ny fividianana ny ilaina ho an'ny sakramenta, ny vahiny dia mbola mila mameno ny fahatsiarovana amin'ny fanomezana.
Ny valopy ho an'ny ray aman-dreny dia afaka atolotra aorian'ny fombafomba, ary eo amin'ny latabatra fandroana dia mametraka mofomamy tsy mahazatra.
Ny akanjo maotina na kitapo ho an'ity tranga ity dia ho ilaina ary ho ankasitrahana. Ny akanjo marevaka dia vitsy monja no novidin'ny moms, satria ambony ny lanjany. Maninona raha entina amin'ilay zaza kely miaraka amin'ny fanomezana toy izany.
Mba hanampiana ny fanomezana maimaim-poana amin'ny alika novolena dia misy vahaolana tsara foana.
Ny sarin'ny trano iray misy varavarankely feno zava-mahagaga tena izy dia hahagaga ny ray aman-dreny ary hampifaly ny masony. Valiny mahaliana, inona no homena zazalahikely zazavao.
Manao fanomezana ho an'ny zaza vao teraka
Misy karazana fomba fiasa maromaro azo antoka, fomba fandaminana fanomezana ho an'ny zazalahikely vao teraka, mba hahafahana manao zavatra tsotra amin'ny zavatra mamirifiry sy mamy.
Ny akanjo na ny zavatra toy izany dia simba, miverina amin'ny lollipops. Hodinihin'i Mama ireo karazan-koditra toy izany.
Ny akanjo dia mety ho lasa endrika. Ny kalesy, ny môtô, ny takelaka misy tarehimarika mitovy amin'izany dia ny lamba sy ny akanjon'ireo ankizy mamirapiratra.
Ny harona feno fananana ankizy, dia mbola safidy tsara ho an'ny famolavolana fanomezana.
Andro iraisam-pirenena ho an'ny namana - tantaram-piainana
6 jolay - Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanjono
Taom-baovao - tantara fialantsasatra
Fanorenana varavarankely ho an'ny Taombaovao
Inona no homena vehivavy iray mpiara-miasa amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany?
Fanomezana ho an'ny namana amin'ny tanany
Nahoana ny voaniho no mahasoa?
Mpanjifa amin'ny kodiarana
Shrimp avy amin'ny kalsioma
Ireo vokatra ilaina amin'ny fo
Hazo misy varavarankely misy lantihy
Christmas ball - hevitra tsy mahazatra!
Akanjo maivana fohy
Amin'io andro io ve no atao batisa ny ankizy?
Kitapo plastika ho an'ny voankazo sy legioma
Tsindrin-tsakafo amin'ny tongotra